Professional Auto Detailing Supplies | OPS
Niorina tao amin'ny 2007, manana tantaram-piainana an-taonany maro isika ao amin'ny indostrian'ny fiarakodia. Zhejiang OPS Environmental Protection Technology Co, Ltd dia mpamokatra lehibe vita amin'ny karazan-javamaniry rehetra amin'ny famatsiana Auto Auto Detailing, toy ny vovobony fanasana fiara, mpanadio kodiarana, formula momba ny shampoo fanasana fiara, vokatra fanadiovana anatiny. takelaka fanasana varatra, tsiranoka fanondrahana varatra, mandritra ny vanim-potoana rehetra, izahay dia mipetraka ao Zhejiang, fidirana fitaterana mety.
Ny vokatray rehetra dia manana patanty ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ary mankasitraka betsaka amin'ny tsenam-barotra anatiny sy ivelany. Manantena izahay ny hanorina fifandraisana tsara sy maharitra eo amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao amin'ny ho avy tsy ho ela.
Mampiditra ny fampandrosoana sy ny famokarana an-trano
Manam-pahefana manana fahaizana ara-teknika, mampiasa mpiasa matihanina sy manam-pahefana za-draharaha. Manana teknolojia famokarana sy fitaovana famokarana izahay.
Tsara ny fitantanana kalitao
Ny tranokely tsara sy ampy tsara ary ny fanaraha-mason'ny kalitao manerana ny dingana rehetra dia ahafahantsika manome toky ny fahafenoan'ny mpanjifa.
Manangana fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ny mpanjifa sasany
Noho ny vokatra avy amin'ny vokatra avy amin'ny vokatra sy ny mpanjifa miavaka, dia nahazo tamba-jotra maneran-tany tonga tany Vietnam, Singapore, Malezia, Kazakhstan, Etazonia, sns.
Tsara kalitao sy vidiny lafo
Izahay dia manome antoka ny vokatra rehetra amin'ny vidiny tsara indrindra sy ny kalitao fanafarana mivantana avy amin'ny orinasa, miantoka ny voamarina entana. Misaotra antsika rehetra nanohana!
Fifandraisana maimaim-poana sy asa fanompoana mahafa-po aorian'ny fivarotana
Ny orinasa eto amintsika dia mihevitra ny "vidin-tsakafo, ny famokarana mahomby ary ny serivisy serivisy tolotra" araka ny tanjontsika. Manantena izahay ny hiara-miasa amin'ny mpanjifa maro kokoa amin'ny fampandrosoana sy ny tombontsoa iombonana.
Ny orinasa sy ny birao
Manangana ekipa mpivarotra matihanina ny OPS miaraka amin'ny tanjon'ny «tombotsoan'ny mpanjifa voalohany»,
hifantoka amin'ny famahana ny famandrihana samihafa talohan'ny fivarotana, fivarotana sy ny toeram-piasana.
Ny vokatray dia eo amin'ny toeran'ny lehiben'ny vokatra ao an-toerana,
ary mandray tsara any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny OPS dia mifamatotra amin'ny toe-tsaina "manentana ny olona, ​​matihanina sy mahaliana" amin'ny orinasa, miaraka amin'ny serivisy matihanina, mahitsy, mendrika ary mahasoa.
Tetik'asa ara-tontolo iainana
Mahaliana ny vokatra eco?
Alefaso aminay tsipika androany ho an'ny teny maimaim-poana!